नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौँ, १० असोज: शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजारमा कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ६१.२७ बिन्दुले घटेर दुई हजार ७५८.४८ मा ओर्लिएको छ ।
आइसिएफसी फाइनान्स ८.९८, घलेम्दी हाइड्रोपावर ७.९६, मल्टीप्रपोज फाइनान्स कम्पनी ७.६६, वेसट फाइनान्स कम्पनी ७.६०, माउण्टेन हाइड्रो नेपालका लगानीकर्ताले ७.३७ प्रतिशतले गुमाए ।-रासस/File Photo
साताको कारोबारको अन्तिम दिन आज सुनको भाउ कति ?
काठमाडौं, ५ कात्तिक । नेपाली बजारमा आज सुनको भाउ स्थिर रहेको छ भने चाँदीको भाउ
दशैमा एसएमएस मार्फत कतिले दिए शुभकामना ?
काठमाडौं, ४ कात्तिक । हिन्दुधर्मालम्बीहरुको महान चाड दशैमा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमको सिममार्फत